(ဂါနာသမ္မတနိုင်ငံ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ကိုဩဒိနိတ်: 7°49′N 1°03′W﻿ / ﻿7.817°N 1.050°W﻿ / 7.817; -1.050
နိုင်ငံတော် သီချင်း: "ငါတို့ ဂါနာမြေကို ဘုရားသခင် ကောင်းချီးပေးပါစေ"
en:Ghanaian Sign Language
အာလ်ဘန် ဆူမာနာ ကင်းစ်ဖို့ဒ် ဘက်ဘင်
၁၉၅၇ ခုနှစ် မတ်လ ၆ ရက်
၁၉၆၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်
၁၉၉၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၈ ရက်
၂၃၉,၅၆၇ km2 (၉၂,၄၉၇ sq mi) (အဆင့်: ၈၀)
၄.၆၁ (၁၁,၀၀၀ km; ၄,၂၄၇ mi2)
၃၁,၀၇၂,၉၄၀ (အဆင့် - ၄၇)
၁၀၁.၅/km2 (၂၆၂.၉/sq mi) (အဆင့် - ၁၀၃)
အလယ် · ၁၃၈
၁၉၆၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ဂါနာနိုင်ငံ၌ စစ်တပ်နှင့် ရဲအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းကာ အာဏာသိမ်းခဲ့သည်။ ထိုအာဏာသိမ်းပွဲကို ဂါနာတပ်မတော်မှ ဗိုလ်မှူးကြီး ကိုတိုကာက ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ အင်ကရူးမားသည် ထိုအချိန်က တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်နေချိန် ဖြစ်သည်။ ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ပြုလုပ်၍ အရပ်သား အစိုးရလက်သို့ အာဏာများကို ပြန်လည် လွဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ သို့သော် ၁၉၇၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် တပ်မတော်မှ ပြန်လည်၍ အာဏာသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြန်သည်။ ထိုအာဏာသိမ်းပွဲကို ဂါနာတပ်မတော်မှ ဗိုလ်မှူးကြီး အချီယမ်ပုန်က ဦးဆောင်သည်။ အချီယမ်ပုန်သည် ဂါနာနိုင်ငံ၏သမ္မတ အဖြစ် ခံယူသည်။
အာဖရိကတိုက် အနောက်ဘက်ကမ်းခြေ ဂင်းနီပင်လယ်ကွေ့၌ တည်ရှိသော ဂါနာသမ္မတနိုင်ငံတွင် လေတပ်ဗိုလ် ဂျယ်ရီရောလင်းသည် သမ္မတမစ္စတာလီမန်းကို ရာထူးမှ ဖြုတ်ချပြီး သုံးနှစ်အတွင်း ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် အာဏာသိမ်းပိုက်လိုက်ကြောင်း ၁၉၈၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃ဝ ရက်နေ့က အက္ကရာအသံလွှင့်ဌာနမှ ကြေညာသည်။ ထို့နောက် ဂါနာနိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကိုလည်းကောင်း၊ အစိုးရအဖွဲ့ကိုလည်းကောင်း၊ ပါလီမန် လွှတ်တော်ကို လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ အားလုံးကိုလည်းကောင်း ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်ကို အုပ်ချုပ်ရန်အတွက် ယာယီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးကောင်စီ (ပီအင်ဒီစီ)ကို ဖွဲ့စည်းကြောင်း ၁၉၈၂ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ကြေညာသည်။ နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးကို တာဝန်ယူမည့် အဆိုပါ ကောင်စီတွင် အဖွဲ့ဝင် ၁၁ ဦးပါဝင်ရာ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဗိုလ်ဂျယ်ရီရောလင်းအား ခန့်အပ်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံတွင်းရှိ ထိပ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ လွှတ်တော်အမတ်များ၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်များ၊ ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးမှ အရာရှိကြီးများ၏ ဘဏ်စာရင်းများနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းများအား ယာယီအမျိုးသား ကာကွယ်ရေးကောင်စီ၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ ဘဏ်တိုက်များမှ ထုတ်ပေးခြင်း မပြုရန် ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်နေ့က အမိန့်ပေးခဲ့ သည်။ အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဂျယ်ရီရောလင်းသည် နိုင်ငံသမိုင်းကို ပြည်သူများ ကိုယ်တိုင် ပြဋ္ဌာန်းရန် ဦးတည်ချက်ဖြင့် ရေးဆွဲသော ယာယီအမျိုးသား ကာကွယ်ရေး ကောင်စီ၏ နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်များကို ထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့သည်။ ယာယီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးကောင်စီ၏ ရည်မှန်း ချက်သည် စီးပွားရေးတွင် အကျိုးမဲ့လွန်ကဲစွာ ငွေများသုံးစွဲမှုကို ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးပိုင်းဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်မှုတွင်လည်း စည်းကမ်းများ ထည့်သွင်း ကြပ်မတ်လုပ်ဆောင်ရန်တို့ဖြစ်သည်။ ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် အစားအစာများ တင်သွင်းမှုကို အနည်းဆုံး ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်းထိ လျှော့ချရန်၊ ကိုကိုးထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကို လည်း ပြန်လည်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် ပီအင်ဒီစီက ရည်မှန်းထားသည်။
ကုန်သည်များအား ကုန်ပစ္စည်း ဈေးနှုန်းများ လျှော့ချရန် အစိုးရအဖွဲ့သစ်၏ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်သည် ထိရောက်မှု မရှိသဖြင့် ကုန်ဈေးနှုန်း ထိန်းချုပ်မှုများကို လုပ်ဆောင်ရသည် အထိ ဖြစ်ခဲ့သည်။ အခွန်အခ ထိန်းချုပ်မှုများကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ရသည်။ အစိုးရအဖွဲ့သစ်တက်လာပြီးနောက် တိုင်းပြည်၏ စီးပွားရေး အခြေအနေ တိုးတက်စေရန် နှစ်တိုအစီအစဉ်အရ ပီအင်ဒီစီ သည် စေတနာ့ဝန်ထမ်း တော်လှန်ရေး အထူးအလုပ်တပ်စုများ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ယင်းတပ်စုများတွင် အထူးသဖြင့် အထက်တန်း ပညာရေး ကျောင်းသားများလည်း ပါဝင်ပြီး လမ်းပန်း အဆက် အသွယ် မကောင်း၍ စုပြုံနေသည့် နိုင်ငံ၏ အဓိက ထွက်ကုန် ဖြစ်သော ကိုကိုးတန်ချိန် ၈၂၄ဝဝ ခန့်ကို ဆိပ်ကမ်းမြို့များသို့ တင်ပို့ပေးခြင်းကို ကူညီပေးကြသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ကုန်ပိုင်း တွင် စုပုံနေသည့် ကိုကိုးအိတ်များမှ အိတ်ပေါင်း နှစ်သိန်း ခန့်ကို ဆိပ်ကမ်းသို့ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ကိုကိုးနှင့် အခြား ကုန်ပစ္စည်းများ မှောင်ခိုထုတ်လုပ်မှုကို တားဆီးသည့်အနေဖြင့် မှောင်ခိုလုပ်သူများအား သေဒဏ် အပြစ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပီအင်ဒီစီက ကြေညာခဲ့သည်။
လစ်ဗျနိုင်ငံနှင့် သံတမန်ဆက်ဆံရေး ပြန်လည်ဆက်သွယ်ရန် သဘောတူညီကြောင်း ပီအင်စီက ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ကြေညာခဲ့သည်။ လစ်ဗျနိုင်ငံနှင့် ဂါနာနိုင်ငံတို့သည် သမ္မတ မစ္စတာလီမန်း လက်ထက် ၁၉၈ဝ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် နှစ်နိုင်ငံ သံတမန်အဆက်အသွယ် ဖြတ်တောက်ခဲ့ကြသည်။ လစ်ဗျနိုင်ငံမှ စားသောက်ကုန်နှင့် ဆေးများကို ဂါနာနိုင်ငံသို့ အကူအညီပေးခဲ့သည်။ လစ်ဗျနိုင်ငံနှင့် ဂါနာနိုင်ငံတို့ သွေးစည်းညီညွတ်မှုကို ပြသည့်အနေဖြင့် ဂါနာနိုင်ငံအား ရေနံစိမ်းပီပါ ငါးသိန်းကို လစ်ဗျနိုင်ငံက အခမဲ့ ပေးအပ်ခဲ့သည်။ လစ်ဗျနိုင်ငံနှင့် သံတမန်အဆက်အသွယ် ပြန်လည်ဆက်သွယ်ခြင်းကို ကန့်ကွက်သည့်အနေဖြင့် နိုက်ဂျီးရီးယား နိုင်ငံသည် မိမိ၏သံအမတ်ကြီးအား ဂါနာနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့သည်။ အလားတူပင် နိုက်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကလည်း ဂါနာအစိုးရသစ်အား အသိအမှတ်မပြုသည့်အနေဖြင့် ဂါနာနိုင်ငံသို့ ရေနံ တင်ပို့မှုကို ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့သည်။ မတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင် နိုက်ဂျီးရီးယားသမ္မတ ရှာဂါရီနှင့် ဂါနာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ လာဂို့မြို့တွင် ဆွေးနွေးခဲ့ရာမှ နှစ်နိုင်ငံ တင်းမာမှု အနည်းငယ် လျော့ပါးခဲ့သည်။ သမ္မတ ရှာဂါရီက နိုက်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံအနေဖြင့် ဂါနာအစိုးရအဖွဲ့သစ်နှင့် ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်းနှင့် ဂါနာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးကိစ္စတွင် ဝင်ရောက် မစွက်ဖက်ရေး လမ်းစဉ်ကို လိုက်နာရန် ရည်ရွယ်ကြောင်း ဂါနာကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား ပြောကြားခဲ့သည်။
ဂါနာနိုင်ငံ၏ ရေနံချက်လုပ်ခြင်းကို ယခင်ကအတိုင်း ပုံမှန် ပြန်လည်ပြုလုပ်တော့မည်ဟု ဧပြီလ ၆ ရက်နေ့တွင်ကြေညာခဲ့သည်။ မတ်လအတွင်းကလည်း ဂါနာအစိုးရကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးသွားရောက်ခဲ့ပြီး ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့် ဓနသဟာယနိုင်ငံများဆိုင်ရာ ဝန်ကြီး လော့ဒ်ကာရင်တန်နှင့် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ အနောက်အာဖရိကနိုင်ငံများ၊ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု၊ ကျူးဗားနိုင်ငံ အပါအဝင် စီးပွားရေး အပြန်အလှန် အထောက်အကူပြုမှု ကောင်စီ (စီးမီးယား)၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသို့လည်း ဂါနာအစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ချစ်ကြည်ရေးခရီး သွားရောက်ခဲ့သည်။ ကျူးဗားနိုင်ငံနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး သဘောတူညီချက် လေးခုကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့်ပြင် ဆိုဗီယက်၊ ဘူဂေးရီးယား၊ အရှေ့ဂျာမနီနှင့်ဟန်ဂေရီ နိုင်ငံများမှ လည်း စီးပွားရေး အကူအညီများ ထပ်မံရရှိခဲ့လေသည်။
↑ Emefa.myserver.org။ 26 April 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2010-12-21 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Language and Religion။ Ghana Embassy။ 1 March 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “English is the official language of Ghana and is universally used in schools in addition to nine other local languages. The most widely spoken local languages are Dagbanli, Ewe, Ga and Twi.”
↑ ၃.၀ ၃.၁ Ghana – 2010 Population and Housing Census။ Government of Ghana (2010)။ 25 September 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ People > Ethnic groups: Countries Compared။ NationMaster။
↑ 2020 Population Projection by Sex, 2010–2020။ Ghana Statistical Service။ 24 April 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Mintah၊ Antoinette I. (2010)။ 2010 Provisional Census Results Out။ Population Division, Ghana Government။ 15 June 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။6October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၈.၀ ၈.၁ ၈.၂ ၈.၃ Report for Selected Countries and Subjects။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂါနာနိုင်ငံ&oldid=699512" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၄၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။